Dhugaan Firummaa hin balleessitu! | Kichuu
Dhugaan Firummaa hin balleessitu!Jawar Mohammed olola ABO fi WBO irratti ooftu dhaabuu qabda!
Yaa Uummata Oromoo Biliisummaaf Jecha Barataan Keenya Karaarratti Dhiiga Isa Dhangalaasa Ture Isuma Kanaa?
Biliisomttaniittuu? Biliisummaa Jechuun Kumaandi Posti Labsuu Jechuudhaa?
Biliisummaa Jechuun Xiyyaaraan Rukutamuudhaa?
Biliisummaa Jechuun Mirga Ke Hin Falmmatin Jechuudhaa?
Biliisummaa Jechuun Daangaa Keerraa Buqqa’u Jechuudhaa?
Biliisummaa Jechuun Nama Sabaan Oromo Kan Ta’e Wayyaanef Kan Hojjetaa Ture Aangoorra Kaa’atani Biliisomne Jechuudha Me Warri Isiniif Hin Galle Itti Yaadaati Naaf Deebisaa
Godina Gujji lixaa keessatti guyyaa kaleessaa irraa eegalee lolatu walitti fufiinsaan geggeeffamaa jira halkan leelli irraa eegaluun aanaa Qarcaa bakka jedhamutti worranni RIB
Haxxee WBO seenuun daaraa taatee jirti
aaga dhagayaa WBOn injifanoo Gudaa Galmesera.
Ammas dhaamsi keenya nuti isaan adamsinee
Waranutti hin jirru odptu bakka nuti jirrutti
Nu waraansisuuf nu barbaadaa jira
Amma kottaa refka keessan guurradha aanaa qarcaa irraa
Of eeggannoo guddaa yeroo amma kana miidiyaan OMN f jawaar mahammad basaastu OPDO olaanaa taa’ani tajaajila jiru.uummanni bakka jawaar deemtutti fi miidiyaan sabbata haadha iyyeessaa irraa funaaname ijaarrame kun deemutti faallaa OPDO dubbatan guutummaa oromiyaa keessaa guuramanii hidhamaa jiru.kanaafuu miidiyaan OMN s ta’ee Jawaar Mohammed meeshaa basaastu OPDO ta’ee waan jiruuf sabboontonni miidiyaa kanarratti dhiyaatanii akka yaada keessan hin laanne.akkasuma illee kanneen utuu hin beekiin quunnamtii gurbattii xawawlwaallee kana waliin qabdan akka addaan kutan utuu balaan isinirraa hin ga’ani.akkasumallee miidiyaan kuniif Jawaar Mohammed oromiyaa keessa akka hin sochoonee ugguramu qabdi.fakkeenyaaf uummanni keenya yeroo darbe isheen lixa oromiyaa deemte sana miidiyaa kanarratti ba’ani dubbatan yeroo ammaa waraana wayyaaneen guurramanii hidhamaa jiru.sababni isheen kan goteefimmoo uummanni dhihaa oromiyaa waan likkiitti ishee galcheef aariin maqaa jara kanaa barreeffatee mootummaaf laatte yeroo ammaa kana mana hidhatti guursisaa jirti.
By caal Hayilu
Jawar Mohammed olola ABO fi WBO irratti ooftu dhaabuu qabda!
OPDO’n fi deeggartoonni ishii gama tokkoon bilisoomne jedhu, gama biraan ilmaan Oromoo deeggartoota fi miseensota ABO waan ta’aniif qofa hidhaatti yommuu guurraman isaan ofii olola jibbaansaa kan oofan hanqannaan, nuunis ”hin dubbatinaa, baga, callisa haa du’aniiyyuu…” jedhu.
Sagalee keenya ukkaamsuf,” lola faarsaatii hidhaa fi ukkaamsaa balaaleffachuun hin taatu.” nuun jedhan Jawaarfaan.
Kan lola faarsee uummata nagasrratti rasaasa banee oromoo nagaa dhoorkate WBO moo OPDO dha?
”Waraanni Bilisummaa Oromoo nun barbaachisu.” jechuun ololli WBO xiqqeessuuf oofan maddisaa diiggaa fi duula ABO dhabamsiisuti.
Kunis WBO’n kashalabboota suufan gubbashii dhiitessitee deemtu osoo hin taane qaqqaalii ijoollee Oromoo gaafa murtii kanneen jireenya fi lubbuu ofii caalaa Oromoo jaalatanii wareegamaaf bahaniif kabajaa dhabuudha. Warri hardha WBO balaallefatu:
1. Kaan jiruu ofii fooyyeffachuuf dantaa dhuunfaa filatanii waan hunduu itti toleef bilisoomne jechuun olola uummata tamjeessuu oofu. Wanti biraa hafnaan WBO akka jabaatu dumbulloo tokkollee gumaachanii kan hin beeknetu hiree WBO murteessuu barbaaddi.
2. Kaanimmoo Warruma duraanuu WBO basaasaa fi ABO Jechuun oromoo hiisisaa turaniidha.
Kanneen miidiyaa dhuunfatan Jawaar dabalatee olola farrummaa ABO irratti oofan dhaabuu qabu.
#Jawar kijiba guddaa waltajjii hindarratti kijibaa jira. Uummata harka dhaansisuuf qabsaahota keenyarratti duuluu isa hin barbaachisu.
Mootummaas tahee jaarmiyaaleen ” maalif akkanaa fi akkas jetta? ”Jedhee gaafatu waan hin jirreef waan garaasaa dubbata. Kaayyoon isaa garuu dhugaa xiqqoo itti makee Oromoon akka ABO irratti duuluufi ABO balaaleffatu gochuudha.
Kunis duraanuu ABO irratti duulaa waan tureef jidduutti akka Waan nama dhugaa dubbatu fakkaachuf walakkaa dhangalaa’aa ture. Kaayyoo raaga isaa ABO sadarkaa suphamuu hin dandeenyetti caccabeera jedhu adeemsa keessa dhugoomsaa deemudha. Kanas ifatti dubbachaa jira; seenaan guyyaa tokko haqa qabsaahota ni baasa.
”WBO dhaan yoo hiikkattanii Kaambii seenuu shakkitan hidhadhaatii Kaambii Seenaa jennaan didan.” Maalif kijibuun barbaachisee? WBO Kaambii mataasaa keessa osoo jiruu mitii kan waraanni mootummaa Abiy sakkattaaf itti bobbahe?
Kuni kijiba guddaadha. Mootummaan kana yaades jedhes hin jiru; innis kana hin jenne.
Yoo ofitti himee jiraate malee.
”Qabattooyyuu hiikkadhaa.” jechaa akka bahe namuu ni beeka.
Kan biraa ” Jaal Marroon gali jennaan yoo Jaal Daawud gali naan jedhe nan gala naan jedhe.” Jechuun kijiba guddaa dha.
Qarumayyuu Jaal Marroo hin dubbisnes, kan biraa eenyu taanan hooggana bira darbee Jaal Marroo dubbisa? Naamusa kamiin Marroon Jawaar waliin dhimma kana mariyata? Kijibaan harka rukkuchiifschuun yeroof Malee boru dhugaan ni baati. Hiikoon kanaas ifa.
Dhaamsi dubbii kanaa OPDO quuftee hooggantoota keenya hidhaa jirtuun Jaal Daawuditu badii qaba jechuun quba akeeku dha.
Osuma jennuu ”Shanees,… OPDOs hin sodaadhu.” Jechuun harka rukkuchiifschuunis boru ittigaafatama jalaa nama hin baasu.
Wanti beekamu qabu ABO Abdiisaa malee Oromoof sodaa tahee hin beeku, wanti inni kana jedheefuu sodaa waan qabuufidha. Waan hin sodaanne nan sodaadhaafi hin sodaadhuun wanti nama dhaadachiisu hin jiru.
Jawaar tooftan ABO dhabamssiisuu keesatti dhiira mataasaa bahachaa jira. Hunda keenyatu itti dhumna malee WBO tahee ABOn hin Badu.
Humni hidhatee Xoophiyaa keessa jiruu fi ammallee of jabeessaa jiran keesatti WBO maalif akka diina godhatan isaantu beeka. Hardha Amaarri Oromiyaa walakkaan kiyya jechuun guyyaan agarsiisaa waraana nutti agarsiisaa lola xinsammmuu osoo banaa jiru, mootummaa gabroomfataa Afaan keenya dubbatuun ”..mootummaa adaarati, nutu imaanaa itti kenne hin tuqina.” Jechuun oromoo ukkaamsurraa waan addaa miti!
Bakka deeme jidduu kana haasawa godhu hunda keessatti akka waan ABO mootummaa humnaan cabsee qabachuu yaadetti dhiyeessunis olola farrummaa fi jibbiinsaa malee dhugaa miti.
ABOn nagaa akka barbaadu waraana 1350 dabarsee kennuu caalaa ragaan biraa hin jiru.
Kan WBO fi hooggantoonni osoo mariirra jiran ololaaf waraana Lasse mootummaa tahee osoo jiru WBO tti quba qabuun cubbuu dha.
Kan biraa wanti hedduu nama gaddisiisu namoonni hedduun ABO bakka meeqatti caccabee jedhu.
Warra caccabe jedhan haa gaafatan maal akka qananii fi maal akka hojjachaa turan. ANO nuti beeknu garuu wareegama ulfaataa kaffalaa ture.
WBO gantoonni ciccirtee kaan rasaasan fixan deebisanii ijaaruu, Qeerroo Bilisummaa Oromoo leenjisanii ijaaruun bobbaasan hojiilee gurguddoodha.
Warri Qeerroo ittiin dhaadatsn QEERROON akka ijaaramee sochiirti jiru bara 2013 yommuu ani ala kana dhufee dubbadhu natti kolfas turan akka gowwaatti.
Hundaafuu ABO fi akkuna yaaddan ololaa fi Waraanan akkasumas hidhaan balleesina jettanii yaaddan taanan hin milkooftan!
Hanga Oromoon jiruu fi OROMOON hin bilisoominitti QBO ABO dhaan gageeffamuu fi WBO numa jiraatu.
Araarri hin barbaachisu jechuun deemastii uummata fixaa jechuun ala hiikaa biraa hin qabu. Walumaa galatti waltajjii Jawaar Magaalaa cirootti gaggeessu tarii yoo mirqaanee jiraate malee karaa kamiinuu sirrii hin turre. Olola dabballoonni OPDO ABO irratti gaggeessan miidiyaa hundi keenya itti dadhabne ijaarame irratti irra deebi’ee labsaa ture.
Dhumarratti Jawaar waanuma feete taata malee WBO humnaan boojii taasiftanii haamilee Oromoorraa hin deemtan. Olaantummaa Habashaa Oromoorratti bargaagsisuuf WBO fi ABO dhabamuu hin qabu.
WBO fi ABOn haa jiraatu!
you should have play middle ground if indeed the way you said you are, but the truth is you are mersanery for OPDO
Lixa shaggar keessaati WBO sakata’uuf polisiin oromiyaa dirqama fudhatanii deemaaru. WBOs of irraa ittisuuf dirqama qaba. Kunis ajajamee dhaqaara sunis ajajamee ifirraa ittisa.
Harki harka hin nyaatu ture! ilmaan abbaa tokkoo wol nyaachuu caala kan nama gaddusiisu hin jiru. Ayi caarraa keenya!
Oromiyaa bahaa Araddaa Gursumitti humnoonni Somaalee lola banuun namoota hedduu miidhaa jiran Qabeenya ummataas saamanii jiran. Garuu Abiyii fi Lammaan diina saba keenya ajjeesee saamaa jiru dhiisaniitu ABO dhaaba dhiiga isaatiin jijjiirama kana fide dhabmsiisuuf irratti duulaa jiran. Haata’uuti OPDOn duula amma jalqabdeen kan ofii ittiin baddu ta’a malee ABO nan balleessa jedhanii yaaduun abjuu dha. Down Abiyi! Down Lamma!!
አሁንም እደግመዋለሁ!! ቤተ ክርስትያንን እና መንፈሳዊ በዐላትን ለፖለቲካ ፍጆታ ማዋል ከባድ ነውር፣ ብሎም አሳፋሪ ድርጊት ነው !!
XAWALWAALLUMMAA ILMAAN OPDO!!!
Bara fagoo miti isuma bara darbe soba #OPDO, #Deeggartonni OPDO, “#Aktivistonnii” OPDO, #Gantonnii kaleessa qabsoo gananii jireenya mataa isaanii gaggeessaa jiran hundi #olola walfakkata gaggeessaa tura. Akka waraabessaa kessaa fi alaa wal waamanii gadoodanii olola oofu.
Olola qaamaa tokkorratti xiyyeeffate. Olola #Qeerroo, #Oromoo mogolee buusu gaggeessu. Olola dhaaba hangafaa Oromoo jibbisiisuuf godhamu. Olola #WBO irratti xiyyeefatu. Faalla kanaan ammoo dhaaba ilamaan oromoo ficcisiisa hamma har’aatti Oromoo dhihaa, kibbi oromoo, baha oromiyaa ficcisaa jirutu #Faarsuu.
Ilala keessattu ilmaan OPDO maqaaf “#AKTIVISTII” ofiin jedhan waggaa 5-10 guutuu #ABOn hin jiru badeera. #WBOn badeera hin jiru jechuun #QERROO fi #OROMOO mogolee buusaa turan Amma garuu daqiiqaa muraas gidduutti ABOn waraana #mooratti galchuu qaba jedhu. Ilaala warruma Waggaa 5 guutu ABOn badeera, WBOn hin jiru jechaa turetu har’a as galagalee WBOn hiikkachuu qaba jedhu. Kaleessa WBOn hin jiru jechaa turani har’a eessa fidani?
Warri kaleessa ABO/WBO irratti FB live waraabaa turan har’a ammoo hidda mormaa hamma kessaa yaa’utti afaan bananii #WBOn hiikatee mooratti deebi’uu qaba jedhu. Keessumaa ammoo warri keessa darbanii “Otoon ani ABO tahee qawwee mitii #Qabattoo koo hiikkadheen mootummatti harka kennadha” warri jedhanis dhagahaa jirru. Wa’een qawwee hiikkachuu kuni isa akkuma qabattoo hiikkatanii sireerrati dubartiitti harka hiikkatanii isatti fakkate namichaaf. Garuu WBOf qawwee hiikkachuun akkam akka ulfaatu WBO fi UMMATA WBO hidhachiise qofaatu beeka.
Gama biraan ammoo warrumti har’a ABOn hiikkachuu dide, WBOn hiikkachuu didee mootummaa keenya waraanaa jira jedhan kaleessa obbo #Leencoo fi obbo #Galaasaatiin bara 1991 WBO hiikachiisuun mooratti deebisanii rukkuchiisani jedhanii afaan banaa turan. Obbo Galaasa fi obbo Leencoo qofaa miti uummata #Wallagaa guutu irratti ololli waggaa 5 guutu oofame. Egaa kana inni sammuu qabu dubbicha gadi fageenyaan ilaalu qabu. Yoo hiikkatte ni Abaaramta, yoo hin hiikkadhu jettes ni abaaramta. Kanaaf falli jiru kami.
Kanumti garaa nama gubu ammoo warri olola kana oofan otoo guyyaa tokko WBO bishaan burcuqqo tokko kennanniruufi ta’e gaarii ture. Silumaa olola isaan gaggeessan maallaqa borsaa abbootii keenna fi sabbata hadholii keenna irraa samamee karaa OPDOtiin isaaniif kennamuun ta’uu isaati.
WBOn hiikkachuu kan danda’u yoo uummanni keenya hayyeme qofaadha.